site ha na 18-06-13
Method maka nnyocha mmiri vepo permeability nke ọgwụ na ahụ ike na akpa Medical akpa na ya ìhè arọ, elu ike, mma akara na nsogbu ndị ọzọ uru, na-eji nwayọọ nwayọọ dochie ọgwụ iko karama, na ọtụtụ-eji onu siri ike na nkà mmụta ọgwụ na mmiri mmiri na nkà mmụta ọgwụ nkwakọ Atiya. Wate ...
Olee otú mkpụrụ nọgide na ya? Karịsịa n'ebe ndịda nke ihu igwe bụ mmiri, akpa meghere, na mmechi dị nnọọ mfe ma dị mfe azụ ka tide, akụ na moisturizing nanị arapara ọnụ, a na-etinye akụ n'ime anyanwụ ikpughe ụbọchị, ga-anọ ihu igwe dị nnọọ mma, elu okpomọkụ ...
Production nke osikapa akpa nlereanya ga-akwụ ụgwọ uche na ihe?
Olee ụdị ozi a ga-esịne ke osikapa akpa dabara mba ọkọlọtọ? Rice akpa atụmatụ ihe ebe ọ bụ ugbu a na mba na nri ụlọ ọrụ bụ nnọọ achọ, anyị ga-ndammana anya. Anyị nwere ihe nkịtị ozi na mkpo osikapa agụụ akpa inclu ...
ọrụ ebere ihe
Enye azụ ka obodo bụ a echiche na ọtụtụ anụ ụlọ SMEs e n'ịgbaso. On May 15, 2018, n'okpuru idu ndú nke Director nke Bureau of Commerce nke Wei eze nko City na ndị ndú nke Xiashan District Science and Technology Bureau, Executive Director nke Federation -...
Production nke osikapa akpa nlereanya ga-akwụ ụgwọ ...